भेरी अस्पताल घटना : मानवीय संवेदना र जवाफदेहिता – Health Post Nepal
भेरी अस्पताल घटना : मानवीय संवेदना र जवाफदेहिता
२०७८ जेठ १४ गते ११:४०
मानवीय संवेदनाभन्दा ठूलो संसारमा सायद अरु केही हुनै सक्दैन। होला संविधान र कानुन। देशको संविधान र कानुनको पालना त गर्नु नै पर्छ। म यसो किन भनिरहेको छु भने हामी हाम्रो संवेदनासँग सकेसम्म ‘कम्प्रमाईज’ गर्न चाहदैनौं।
आफ्नो संवेदनाका अगाडी जुन सुकै मुल्य चुकाउन पनि मानिस पछि पर्दैन। कुनै घटना विषेशमा मानिसले आफ्नो मानसिक सन्तुलन नै गुमाउँछ। त्यो भनेको असाधारण अवस्था हो।
तर त्यसो भन्दैमा फेरि दोषीले उन्मुक्ति पावस् भन्ने मनसाय कतै होइन।
बिहीबार राति जुन प्रकृतीको घटना भयो नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा त्यो नहुनुपर्ने थियो। महामारीको यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कसैको पनि मनोबल गिर्ने गतिविधि हुनु हुँदैन।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ उरहरीका ५४ वर्षीय डिल्लीबहादुर रावतको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहीबार राति करिव ८ बजेतिर मृत्यु भयो।
दाजुको मृत्यु भएपछि भाइ मानबहादुर रावत र छोराहरू भरत रावत सहितका ४-५जनाको समूहले अस्पतालका डाक्टर सहित अरु स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण सुरु गरेको घटनाले मानवीय समवेदना र अस्पतालको व्यवस्थापन दुवैलाई प्रश्नको घेरामा राख्छ।
मृतकका आफन्तको आक्रमणबाट डा. दीपक गुप्ता, डा.चन्द्रप्रकाश साहु, डा. समा अन्सारी, स्टाफ नर्स आश्विन गुरुङ, सदीक्षा गैरे, बन्दना श्रेष्ठलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई चोटपटक लागेको भेरी अस्पताल प्रशासनले बताएको छ।
एकछिन महामारी तर्फ लागौं,
कोरोना महामारीको चपेटमा छ नेपालगन्ज। नेपालगन्जको भेरी अस्पताल आफ्नो क्षमता भन्दा बढी विरामीको उपचार गरिरहेको अस्पताल हो।
अस्पतालको श्रोत,साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण विषय नै हो।
त्यसमाथि बेलाबखत आईपर्ने अरु दबाव। यी सबै समस्याका वाफजुद भेरी अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमण भए नभएको गरिने परीक्षण, स्वाव संकलन, संक्रमितको उपचार, रेखदेख, अक्सिजनको व्यवस्थापनदेखि शव निकाल्दा सम्मको कार्यभार छ।
कतिपय बेला स्वाव संकलनको रिपोर्ट तोकिएको समयमा नआउँदा पनि सर्वसाधारणले आक्रोस पोखेका छन्। कतिपय सर्वसाधारणले इमरजेन्सीमा आफ्ना आफन्तले भर्ना नपाएको भनेर आक्रोश पोखेका थिए।
मूल प्रश्न बिहीबारको घटना पछाडीको कारण के हो त?
रातिको समयमा अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हेरचाहमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्ने गुनासो नयाँ होइन। यसअघि पनि थुप्रैपटक बिरामीका आफन्तले यस्ता गुनासो गर्दै आएका छन्।
रातको समयमा विरामी र उनीहरूका कुरुवा पनि सचेत हुँदैनन्।
भेरी अस्पतालमा रातिको समयमा हुँदै र बढ्दै गएका मृत्युका बारेमा नेपालगगन्जका सञ्चारकर्मीले पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
भेरीमा मात्रै होइन कोहलपुरमा पनि यस्तै समस्या छ। यसरी रातको समयमा हुने मृत्यु बिरामीका आफन्तलाई ‘अस्वभाविक’ लाग्नु स्वभाविकै हो।
अथवा यो एउटा मेडिकल अनुसन्धानको पाटो पनि हुनसक्छ। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ।
यहीबीचमा यो घटनाले राजनीतिक रंग पनि लिन थालेको छ।
मृतक रावतका भाई मानबहादुर रावत ‘नेकपा एमाले’ प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। उनले मुख्य मन्त्रीको हवाला दिँदै धम्क्याएको कुरा आक्रमणमा परेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएपछि घटनामा ‘राजनीतिक फ्लेवर’ देखियो।
अस्पतालजस्तो संस्थामा व्यवस्थापन र प्रमुख नियुक्ति नै राजनीतिक दलका आधारमा हुन्छ। साँच्चिकै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै हवाला दिएर स्वास्थ्यकर्मी धमक्याएका हुन् भने त्यो छानविन हुन जरुरी छ। जुन कुरा सजिलै स्विकार्य हुन सक्दैन।
निरन्तर उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू हतोत्साही हुनेगरी भएको उक्त घट्नाले विरामीका आफन्त, चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल प्रशासनले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा के कस्ता कमजोरी भईरहेका छन् भनेर मनन गर्न जरुरी छ।
तर स्वास्थ्कर्मीहरुमाथि आक्रमण गर्नेहरुमाथि कानुन बमोजिम कारवाही जरुरी छ।
आफन्त गुमाउँदाको पीडा उनीहरूलाई नै थाह हुन्छ जस्ले आफ्नै आँखा अगाडी आफ्नो प्रियजनको मृत्यु देख्छ।
यी मानवीय स्वभाव र संवेदनाका कुरा हुन्। मृत्यु स्विकार्नु साधारण कुरा पक्कै होईन।